पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध दलाल संसदीय ब्यवस्थाको संकट र अन्तिम छटपटाहट हो- पाटन (ताजा अन्तर्वार्ता) — sancharkendra.com
पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध दलाल संसदीय ब्यवस्थाको संकट र अन्तिम छटपटाहट हो- पाटन (ताजा अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ओली सरकारले राजनीतिक गतिबिधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । आफ्नो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि नेकपाका नेता-कार्यकर्ताहरुले सरकारको कदमबारे धारणा राख्दै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिदै आइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेकपाको युवा संगठन ‘युवा संगठन नेपाल’का केन्द्रीय अध्यक्ष पाटन जंगलीसंग संचारकेन्द्रका लागि दिया चन्दले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
– पाटन जी तपाईहरुका राजनीतिक गतिबिधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति युवा संगठनको धारणा के छ ?
-सर्बप्रथम त प्रश्नका लागि हजुर र हजुरको मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । यो कुरा हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौं कि यो सरकार सामाजिक दलाल पूंजीवादीहरुको सरकार हो र यो केही समयपछि सामाजिक फासिवादतिर जान्छ । जन कुरा आज आएर पुष्टि भएको छ ।तपाई हेर्दै जानुहोस, यो सरकार योभन्दा पनि अझ हिंस्रक भएर आउने निश्चित छ । किन भने केपि प्रचण्ड मण्डलीहरु जन्ताका मुद्धाहरुलाई कसरी ओझेल पार्ने भन्नेमा छन र यस्ता खालका हर्कतहरु गर्ने गरेका छन ।
त्यसकारण हामिले के बुझेका छौं भने यी साशकहरुले ढिलो वा चाँडो यस्ते खालको निर्णय गर्ने कुरा निश्चित थियो, अन्ततः जनतामाझ त्यो निर्णय आएको छ । मेरो विचारमा सरकारको यो कदमलाई ३ तरिकाले बिश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो भनेको दलाल संसदीय ब्यस्थाको संकट गहिरिदै जानु, दोस्रो राज्यको फासिबादी र निरंकुश चरित्र उदांगिन र तेस्रो भनेको बिकल्पको खोजीसहित हाम्रो पार्टीप्रती जनताको आकर्षण बढ्नु ।
– उसो भए तपाईहरु सरकारी प्रतिबन्धको शैन्य प्रतिकार गर्नुहुन्छ वा राजनीतिक हिसाबले जवाफ दिनुहुन्छ ?
– जसरी आज राज्यले एउटा राजनीतिक शक्तिलाई आतंककारी, लुटेराको संज्ञा दिदै प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्‍यो, यो घोर निन्दनीय कदम हो । जहाँसम्म प्रतिरोधको कुरा छ, हामी राजनीतिक हिसाबले यसको प्रतिरोध गर्छौ । हामी भन्न चाहान्छौ कि, यो देशका सम्पुर्ण राष्ट्रबादी, देशभक्त, वामपन्थी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, ब्यापारी बर्गलगायत परीबर्तनका पक्षधरहरु यसको बिरुद्धमा बोल्नुपर्छ, उभिनुपर्छ ।
केपी-पीकेहरुले आज देशमा जबरजस्ती युद्ध थोपर्न खोजेका छन यसप्रती हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ । जहाँसम्म सैन्य प्रतिरोधको कुरा छ त्यो त राज्य जसरी आउछ त्यसरी नै जनताले जवाफ दिन्छ । र जनताले आफ्नो अधिकारको लागि बन्दुक उठाउछन भने हामी त्यसको पूर्ण समर्थन गर्दै उक्त क्रान्तिको नेतृत्व गर्न तयार छौं ।
– राजनीतिक एजेण्डासहित आएको पार्टीलाई सरकारले ‘अपराधिक समुह’ भनेर घोषणा गरिसकेपछि तपाईहरुको अबको बाटो के हुन्छ ?
– हजुरहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने खास अपराधी त यो राज्य हो । उनीहरु आफैले संबिधानको मौलिक हकमा नै बोल्न पाउने, आफ्ना कुरा राख्न पाउने, नागरिकलाई चित्त नबुझेको कुरामा बिरोध, आलोचन गर्न पाउने भनेरे उल्लेख गरिएको नागरिकको नैसर्गिक हकको ब्यवस्था बिपरीत यस्तो निर्णय गरेका छन ।
हाम्रो बाटो त स्पष्ट छ ! हामी जनताका अधिकारको पक्षमा मृत्युलाई आत्मसात गरेर हिडेका छौं भने यो प्रतिबन्धले हामिलाई केही फरक पर्दैन । बरु यो निर्णयले त उनीहरुको सत्तामा धक्का गएको छ ! तपाई बुझ्नसक्नुहुन्छ कथित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु कति आत्तिएका छन र अहिले हाम्रो पार्टी खोज्दै हिडेका छन ।
राज्यले के निर्णय गर्छ त्यो हाम्रो सरोकार होइन । तर जनताले के चाहान्छ त्यो भने हाम्रो सरोकारको बिषय हो । अब के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो नि ? बिभिन्न वाधा व्यवधानहरूलाई पन्छाउदै क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्छाैं र जनताका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बाटोमा हामी निरन्तर लागेका छौ। त्यो भनेको बैज्ञानिक सामाजबाद हो ।
– क्रान्तिको कुरा गरिरहँदा तपाईले भन्न खोजेको के रणनीतिक हिसाबले नै अर्को जनयुद्धको तयारी हुदैँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
-हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौ कि फेरी जनयुद्धमा फर्कन चाहान्नौं । हामीले जनयुद्ध गर्ने भनेका पनि छैनौ । इतिहासको पुनरावृति कहिलै हुदैन, इतिहास त पढने मात्र हो। तर बिगतको इतिहासमा घटेकोजस्तै देखिने अर्थात् उस्तै-उस्तै देखिने घटना पुनः घट्न सक्छ तर उही चाहिँ हैन । उस्तै प्रकारको तर विल्कुलै नयाँ र भिन्न तरिकाले क्रान्ति हुनसक्छ र हुन्छ पनि।
हामीले नेपालको क्रान्तिको चिन्ता मात्र गरेका छैनौ, बिश्व पूंजीवादीलाई परास्त गर्ने क्रान्तिको आवश्यकता देखा परेको छ । हामी त्यतातिर सोचिरहेका छौं । तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि लेनिन र माओले बिकाश गरेको कार्यदिशाको बिरुद्धमा साम्राज्यवादले एन्टिकार्यदिशा निर्माण गरेका छन । फलत: त्यसलाई चिर्न नसक्दा नेपालमा चलेको १० बर्षे जनयुद्ध सिद्धियो र प्रचण्ड पनि सिद्धिएका छन ।अहिलेको हिंस्रक पूंजीवादीलाई अन्त्य गर्ने एक मात्र कार्यदिशा भनेको एकीकृत जनक्रान्तीको कार्यदिशा हो । यसले गर्ने भनेको क्रान्ती हो ।
अहिलेको हिंस्रक पूंजीवादीलाई अन्त्य गर्ने एक मात्र कार्यदिशा भनेको एकीकृत जनक्रान्तीको कार्यदिशा हो । यसले गर्ने भनेको क्रान्ती हो । यसको निसाना भनेको दलाल, भ्रष्टाचार र राष्ट बिरोधि तत्वहरु हुन । यिनका बिरुद्ध लड्दा राज्य कसरी आउछ त्यसले जनताको प्रतिरोधको तह निर्धारण हुन्छ । राज्यले बन्दुकका भरमा आफ्नो ब्यवस्था टिकाईराख्न खोज्दा जनताले बन्दुक उठाए भने त्यसलाई जनयुद्ध मान्नुहोस् वा अरु केही त्यों भविष्यवाणी अहिले नै गर्न सकिदैन ।
– अनि सरकारले बार्तामा बोलाउँदा तपाईहरु जानु भएन रे ! के नगएकै हो र ? यदि हो भने किन जानुभएन ?
– हाम्रो पार्टीलाई औपचारिक हिसाबले बार्ताको पत्र आएन । पहिलो कुरा जुन यो बार्ताको बिषय छ नी, सबैभन्दा पहिले त कोसंग, के बिषयमा वार्ता गर्ने हो त्यो चाहिँ राज्यले स्पष्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसै बार्ता-बार्ता भनेर हुन्छ ? कुरा त्यसो होइन, खास कुरा के हो भने शासकहरु बार्ता नै चाहान्नन । त्यो त औपचारिकता निभाउन गरिएको एउटा नाटक मात्रै थियो । त्यो एउटा भुलभुलैया मात्रै थियो भन्ने कुरा त आज आएर प्रतिबन्धले पुष्टि गरिदियाे नी। हो संसदीय ब्यवस्थाको बिकल्पमा भने हामी बार्ता गर्न तयार छौं ।
– तपाईहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय अपरिपक्क छ भनेर चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ तर यतिले पुग्दैन होला । काउन्टरमा के गर्नु हुन्छ ?
– यो राज्यले गरेको अपरीपक्क निर्णय मात्रै होइन, गैरराजनीतिक भद्दा मजाक हो । यसप्रकारको निर्णयप्रति जनताको समर्थन हुने कुरा त परै जाओस, राज्यमा बसेका सेना, प्रहरी, सशस्त्र, कर्मचारी अझ भन्नुहुन्छ भने कतिपय मन्त्री संसद र उनीहरुकै पार्टीका नेताहरुलाई समेत चित्त बुझेको छैन ।
आज एउटा बिडम्बना भन्नुपर्छ देश सिक्किमीकरणको औपचारिक दिशातिर अघि बढेको छ । त्यसको उदाहरण चन्द्रकान्त रावत (सीके) सँगको ११ बुँदे सहमति र अंकमाल हो । यस्ता खालका राष्ट्रबिरोधी निर्णयका बिरुद्धमा शृंखलाबद्ध आन्दोलनका कार्याक्रम गर्छौं ।
– राजनीतिमा त बल प्रयोगको सिद्धान्त पनि लागु हुन्छ ! प्रतिबन्धको काउन्टरमा शान्तिपुर्ण कार्यक्रमहरु मात्रै हुन्छन या यो अवस्थामा तपाईहरुको पार्टीले बल प्रयोग नै गर्छ ?
– साच्चिकै मालेमाबादलाई मान्ने हो भने बल प्रयोगको सिद्धान्त त अनिवार्य सर्त हो । जहाँसम्म अहिले सरकारको निर्णयका बिरुद्ध बल प्रयोग गर्ने कुरा छ त्यो आवश्यकता पर्‍यो र समयले माग्यो भने जनता जतिखेर जुनसुकै बेला पनि तयार हुन्छ । हामीले त्यातिखेर नेतृत्व गर्ने हो र मैले माथि पनि भनिसकेको छु ।
– जनताको बिचमा जाँदा तपाईहरुप्रतिको समर्थन र सरकार प्रतिको बिरोध मात्र देखा परेको छ वा के छ ?
– राम्रो प्रश्न गर्नुभो ! अहिले हामी जनताकै बिचमा छौं । जनता र राज्यबिचको अन्तरबिरोध ब्यापक बढेको छ । यसको एउटै कारण हो माथिदेखी तल स्थानीय तहसम्म भइरहेको संस्थागत भ्रष्टाचार र दलाली ! त्यो भ्रष्टाचार, दलाली र त्यसको स्केल अहिले दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । बिकासका योजना पनि निश्चित स्वार्थका आधारमा तर्जुमा गरिन्छ र जनतालाई लुट्ने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो चरणमा हामी जनका बिचमा गयौं र हामीले त्यहाँ के पायौं भने जनताले हाम्रो पार्टी खोजिरहेको भेट्टायौं। उकुसमुकुसताको बीचबाट गुज्रीरहेका जनतासँग हामी पुग्दा राहतको सास फेरेका छन भन्ने अनुभूति अहिले भएको छ ।
– तपाईहरुले आफ्नो सत्ता, सेना र आदलत समेत बनाइ सक्नुभएको छ भन्ने कुरा आएको छ नि ! के त्यो सत्य हो ?
– हो हामीसँग जनताको सत्ता छ र न्यायालय पनि छ । जहाँसम्म जनताले मौजुदा राज्यसत्ताबाट आफ्नो अधिकार पाउदैन अनि आफ्नो सत्ता आफै निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउन बाध्य हुन्छन । जुन सेनाको कुरा गर्नुभएको छ, जनताले अधिकार माग्दा दमन गरिन्छ, बन्दुक देखाइन्छ भने त्यसको बिरुद्धमा सेना निर्माण गर्ने कुरा खास ठुलो होइन, त्यो त निरन्तर प्रकियामा आफै गइहाल्छ नी ।
-अनि देशमा कानुनी राज्य भएका बेला तपाईहरुले समानान्तर गतिबिधि गर्दा, समानान्तर सत्ता चलाउदा प्रतिबन्ध लाग्दैन त् ?
– होइन हामीले समानान्तर सत्ता चलाएका छैनौं । हामी त यो सत्ताबाट जनताका अधिकार सुनिश्चित हुदैन र यसको पुर्ण खारेज गर्ने अभियानमा छौं । बरु समानान्तर सत्ता त यही ब्यवस्थाभित्रका पार्टीहरुले चलाइरहेका छन् ।
तपाई देख्नसक्नुहुन्छ केपी-पीके सरकारको बिरुद्ध काङ्ग्रेसको छाँया सरकार छ अरु कुरा गर्नै पर्दैन । त्यसैले दलाल संसदीय ब्यवस्थाको अन्त्य र बैज्ञानिक समाजबाद स्थापनाको महाअभियानमा हामी निरन्तर छौं । हाम्रो पार्टीमाथिको प्रतिबन्धको कुरा जुन छ यो भनेको रिमोट कन्ट्रोलबाट चलिरहेको दलाल संसदीय ब्यवस्थाको संकट र अन्तिम छटपटाहट हो ।
-अन्तिममा भनिदिनुस् की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अबको रणनीति के हुन्छ ?
– हामी देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, दलालीकरणका बिरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्छौ । राज्यको दमनका बिरुद्धमा प्रतिरोध गर्न सबै प्रकारका तयारी गर्छौ । हाम्रो अन्तिम रणनीति त नेपालमा बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नै हो । त्यसैले अहिले हामी जनताका बीचमा छौ । हाम्रो अहिलेको रणनीति जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै आगामी क्रान्तिको तयारीमा लाग्ने नै हुन्छ । अहिलेको दलाल संसदीय ब्यबस्थाले के गर्छ त्यो हाम्रो वास्ताको बिषय भएन । हामी हाम्रो लक्ष्यमा निरन्तर अगाडि बढीरहेका छौ त्यही हाे ।
२०७५ चैत ३ गते प्रकाशित
‘गाउँगाउँमा सि‍ंहदरबार’ कुरामा मात्रै सिमित, कर्मचारीको काम नै चेक काट्ने मात्रै..
संबिधान दिवसको दिन ओलीलाई कसले दियो खतरनाक षड्यन्त्र भइहरेको सूचना ? (अन्तर्वार्ता)
गृहमन्त्री वादललाई हटाउ सकिन्छ ठुलो कुरा हैन, त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ : योगेश भट्टराई
नेपाली मिडियामा संसदीय राजनीति र व्यापार हावी छ: प्रभात चलाउने
गगन थापा र रविन्द्र मिश्र सन्‍नी लियोन जस्तै ‘पोर्नस्टार’: बालकृष्ण ढुंगेल (सनसनीपूर्ण अन्तरवार्ता)